नीलो केरा देख्नुभएको छ ? जसको स्वाद भेनिला आइसक्रिमको जस्तै – Dailny NpNews
नीलो केरा देख्नुभएको छ ? जसको स्वाद भेनिला आइसक्रिमको जस्तै
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ १७, २०७८ समय: १३:३५:२९
इन्भेष्टोपेपर, हामीहरू केरासङ सानै उमेरदेखि नै परिचित छौँ र निरन्तर खाँदै आएका छौँ । केरा कार्बोहाइड्रेट र सुगरले भरपुर एक मिठो फल हो जुन बाह्रै महिना सजिलै पाउन सकिन्छ । हामीले देखिरहेको केराको बोक्रा काँचोमा हरियो हुन्छ भने पाकेको अवस्थामा पहेँलो रङ्गमा परिवर्तन हुन्छ । सायद तपाइ हामी धेरैलाई केराको रङ्ग नीलो हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
के तपाइले नीलो केरा देख्नु भएको छ ? अर्थात् यसको स्वाद कस्तो हुन्छ चाख्नु भएको छ ? यीनै जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन आज हामी नीलो केराको बारेमा जानकारी गराउँदैछौ ।
यस्तो नीलो रङ्गको केरालाई ब्लु जाबा बाना (Blue Java Banana) भनिन्छ । यो केराको जात बर्णशंकर विधिबाट तयार गरिएको हो । (Blue Java banana is hybrid of the seeded bananas – Musa balbisiana and Musa acuminata.)
यो जातको केरा दक्षिण पूर्वी एसियामा उत्पादन हुन्छ र हवाइमा धेरै प्रख्यात छ जहाँ यसलाई “आइसक्रिम बाना”को नामले पुकारिन्छ । केराको बोट १५ देखि २० फिटसम्म अग्लो हुन्छ । यसको राम्रो उत्पादनको लागि ४० डिग्री फरेनहाइटको तापक्रमलाई उपर्युक्त मानिन्छ ।
यस जातको केरालाई फीजीमा ‘Hawaiian Banana’ ’ भनिन्छ भने फिलिपिन्समा ‘Krie’ को नामले चिनिन्छ । यसैगरि मध्य अमेरिकामा ‘Hawaiian Banana’ नामले प्रख्यात रहेको छ ।
यो केरामा अन्य केरामा जस्तै विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू त पाईन्छन नै खाँदा पनि अत्यन्तै स्वादिलो हुन्छ । यसको स्वाद भेनिला आइसक्रिमसङ तुलना गरिन्छ भने कति स्वादिलो होला भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)